Aabaha dhalay Wiilkii Darenka Bulshada Gil gilay oo ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen +Sawiro Naxdin leh |
Aabaha dhalay Wiilkii Darenka Bulshada Gil gilay oo ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen +Sawiro Naxdin leh
Waxaa shalay Dareenka Bulsho badan oo Caalamka kunool gil gilay dareen naxdin lehn aku beeray sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday meydka wiil yar oo sadax sano jir ahaa oo soo tuftay Badda Turkiga,kadib markii ay dagtay doonidii uu wax ka saarnaa wiilkaasi.
Abdullahi Kurdi oo ah aabaha dhalay wiilkii yaraa ee ku dhintay xeebta Turkiga ayaa BBC u sheegay inuu doonayay inuu arko ilmahiisa markii ugu dambeysay oo uu la joogo, lana fariisto ebid.
Waxa uu sheegay in uu xasuusto qofka tahriibka u sameynayay ee muqalaska ahaa inuu kaxeeyay oo uu baray nin Turkish ah, kaddibna ay doonta fuuleen. Waxa uu xusay in ay ahaayeen 12 qof marka lagu daro darawalka.
“Waxaan soconnay 4 ama 5 daqiiqo, kadibna darawalkii doonta waday ayaa arkay mowjadaha inay aad u weyn yihiin, waxaana uu ka booday doonta isaga oo baxsaday.”Ayuu yiri Abdullahi Kurdi
Waxaan isku dayay inaan doonta leexiyo laakiin waxaa gediyay mowjad xoog badan. Taasi waxay ahayd markii dhacday arrintu. Waxaan isku dayay inaan qabto ilmahayga iyo xaaskayga laakiin wax rajo ah ma jirin. Mid mid ayay u dhinteen.
”Ilamahaygu waxay ahaayeen kuwa ugu quruxda badan caalamka. Ma waxaan jirin qof ilmihiisu aanay u ahayn waxa ugu qiimaha badan? Waxay ahaayeen ilmahaygu kuwo cajiib ah. Maalin walba ayay ii kicin jireen inaan la cayaaro. Maxaa ka qurux badan taas. Wax walba waa ay tageen hadda. Ayuu yiri Mr Kurd isaga oo ilmeenayai.
Waxaan jeclahay inaan ag fariisto qabriga qoyskeyga oo aan ku dejiyo xannuunka aan dareemayo, waxa uuna intaa raaciyay in marnaba aysan xasuustiisa ka baxeyn mashaqadii qoyskiisa ku habsatay.